स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ, डा. रोशन मन्त्रालय तानिए, डा. लोहनीलाई योजना महाशाखा – Health Post Nepal
स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ, डा. रोशन मन्त्रालय तानिए, डा. लोहनीलाई योजना महाशाखा
२०७६ फागुन ८ गते १७:०८
स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा महेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । महानिर्देशकका लागि स्वास्थ्य सेवाको १२औँ तहमा कार्यरत प्रमुख विशेषज्ञ हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान भएपछि श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निमत्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको छ ।
श्रेष्ठ यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रवक्ताका रुपमा कार्यरत थिए । उनी स्वास्थ्य सेवाको ११औँ तहका कर्मचारी हुन् र १२औँ तह बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका छन् ।
यसअघिका निमित्तमहानिर्देशक डा. रोशन पोखरेल मन्त्रलयमा तानिएका छन् । उनी गत भदौ अन्तिम साता निमित्तमहानिर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । उनलाई मन्त्रालयमा कुनै पनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।
मन्त्रालय भदौदेखि प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ) तहविहीन छ । डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल विभागको विभागको महानिर्देशकबाट सेवानिवृत्त भएदेखि नै मन्त्रलय प्रमुख विशेषज्ञविहीन हुँदा अहिलेसम्म बढुवा हुन सकेको छैन । मन्त्रालयमा १२औँ तहका ३ वटै दरबन्दी खाली छन् ।
प्रमुख विशेषज्ञ बढुवाका लागि ५ जनाको नाम सिफारिस गरिए पनि नियुक्ति दिइएको छन् । सिफारिस नाममध्ये भर्खरै विभागबाट तानिएका डा. पोखरेल पहिलो नम्बरमा छन् । कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुने बढुवामा उनको अंक सबैभन्दा बढी छ । नवनियुक्त महानिर्देशक श्रेष्ठ पनि प्रमुख विशेषज्ञ बढुवा सिफारिसमा पाँचभित्र छन् ।
योजना महाशाखामा डा. लोहनी, डा. देवकोटालाई समन्वय पठाइयो
मन्त्रालयले नीति तथा योजना महाशाखाको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको छ । महाशाखाको जिम्मेवारी डा. गुणराज लोहनीलाई दिइएको छ । यसअघि उनी कोसी अस्पतालमा थिए ।
मन्त्रालयले बिहीबार नै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरको महानिर्देशक पनि परिवर्तन गरेको छ ।